Wariyaasha Puntlnad oo cambaareeyay tacadiyaadka lagula kaco wariyaasha Puntland. – Radio Daljir
Wariyaasha Puntlnad oo cambaareeyay tacadiyaadka lagula kaco wariyaasha Puntland.
Abriil 30, 2013 7:18 b 0
Garowe, 30, April, 2013 ?- Maantay oo taariikhdu ku beegantahay 30-ka April, maalintuna tahay Talaado, waxaan halkaan kusoo bandhigaynaa dareenkeena ku aadan sida aan uga xunnahay una cambaaraynayno falkasta oo tacadi ah loona gaysto warfidiyeennada iyo xarumaha warbaahinta Puntland, iyadoo aan ka duulayno dhacdadii? ugu dambaysay ee 28-kii bishaa April lagula kacay wariyaasha, lagu jirdilay, lagu burburiyay qaarkood agabkii ay ku shaqaysanayeen. Haddaba ficilkaasi oo ahaa arrin aan qurux-badnayn ma jirto illaa xilligaan cid arrintaasi wax muuqda ka qabatay, ama warfidiyeennada uga garaabtay dhibkii soo gaaray, taasi oo aan u aragnay inaan dawladdu muhiimad wayn u arag shaqooyinka aan bulshadeena u hayno.
Waxaa marar badan soo noq-noqotay inaan warfidiyeennada lagu tixgalin shaqooyinka muhiimka ah ee ay bulshada u hayaan, lagulana kaco waxyaabo aanan qaban ama aysan istaahilin marar badan oo ay warar ?u raadsadaan xarumaha dawladda. Sidaa daraadeed waxaan soo jeedinayaa qodobadaan hoose.
In baaritaan iyo dabagal lagu sameeyo arrimaha tacadiyaadka warfidiyeennada lagula kaco, cidkasta oo ka dambaysana arrintaasina sharciga lagu qaado.
In la sameeyo hannaan cad oo ay ku wadashaqayn karaan wariyaasha iyo dawladda Puntland, markastoo ay jirto shaqo, si ay meesha uga baxdo carqaladahaan soo noq-noqday.
In arrintaan dawladdu u xilsaarto guddi gaar ah oo ka shaqeeya sidii Isfahan wanaagsan oo wadashaqayneed ay u yeelan-lahaayeen warfidiyeennada Puntland iyo dawladdu.
In dawladdu warbaahinta madaxabannaan ku tixgaliso shaqooyinka muhiimka ah ee ay bulshada u yahaan, isla markaana ay ilaaliso xoriyada saxaafadda ee uu jideenayo Dastuurka Puntland qodobkiisa 22-aad.
Annagoo tixgalinayna daruufaha amni ee xilligaan jira, waxaan soo jeedinaynaa in askarta Puntland ay tixgaliyaan shaqada warbaahintu u hayaan shacawaynah Soomaaliyeed, xushmeeyaan kaarka aqoonsiga wariyaha, ?iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo.
Haddii aanan la qaadan qodobadaan talo soojeedinta ah, isla markaana la iska indho-tiro inaan meel ?la-saarin tacadiyaadka warfidiyeennadu kala kulmaan xarumaha dawladda, ?waxaan ka digaynaa inay dhici doonto ?arrimo saamayn wayn ku yaasha wadashaqaynta dawladda iyo warbaahinta madaxabannaan.
Caawa iyo Daljir, Salaasa April 30, 2013, Maxamed Cabdilaahi Cali
Maamulka degmada Luuq oo billaabay qorshayaal lagu xoojinayo amniga